Allol / Magdoul waa goobo ay ka mid yihiin badeecooyinka alol, Doda, Andaba iyo Magdoul -consisting oo isku dhafan oo ah iskuulo aad u sarreeya oo ku dhajiya boodhka waaweyn, dabaqyada cusbada, macdanta kuleylka ah, dhiiqada, cufnaanta maqaarka, sifooyinka sare ee Acacia nilotica qoryaha, qolladaha waawayn ee timirta daaqa Hyphaene, dabiiciga ah iyo buuraha basalt basalt.
Goobtu waa mid ka mid ah saddexda goobood ee la og yahay oo loogu talagalay dadka duurjoogta ah. Marka la duufsado, goobta waxay taageertaa koriinka muhiimka ah iyo jiilaalka qaboobaha, sida: tarbiyada canka ah ee madow, Kittlitz’s boomkeeda, grease yar iyo goose Goose ah ayaa la xaqiijiyay.
286+ avokets iyo 1300+ maraakiibta qoryaha ayaa lagu duubay Doodda (labada jibbaar ugu sarreeya Jabuuti, tan labaadna waa tirooyin muhiim ah oo loogu talagalay Bariga Afrika).
Munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dad badan oo ka mid ah wargeysyada Jabuuti, wargeysyada, wargeysyada carbeed, hareeraha soomaaliga, sheyga sariiraha, Karaawe madow, sheeko madow, hoopoe larks, xajmiga carbeed, xayawaanka cad iyo madow.
Waxaa intaa dheer, meeshan weyn oo kakan ayaa sidoo kale muhiim u ah dabaylaha oo ay ka mid yihiin xayawaannada “Ruppell, Griffon, Bulls-ka soo horjeeda dhaqdhaqaaqa”, Batalur, Verreaux’s goshawk, oo leh xaqiijinta taranta dhammaan gorgoraha la sheego.
Ugu dambeyntii, dhagaxyada gawaarida ah, dhagaxyada dhagaxa ah iyo bannaanka aagga ayaa taageera Trumpeter finch, noocyo xaddidaya kaliya 4 goobood oo Jabuuti ah oo aan ka helin meel kale Bariga Afrika.